I-Balong 5000: Imodem yokuqala ye-5G ye-Huawei | I-Androidsis
IHuawei izisa iBalong 5000, imodem yayo ye5G
IHuawei yenye yeempawu ezibandakanyeka kakhulu kuphuhliso lwe5G Ehlabathini lonke. Ngelixa umenzi waseTshayina efumene iingxaki ezaneleyo Kude kube ngoku. Kodwa kwakhona kukho amazwe athembela uphawu. Kulindeleke ukuba kwiinyanga ezizayo bazise iifowuni zabo zokuqala ngenkxaso yale teknoloji. Nangona oku kunokwenzeka, kufuneka imodem. Le modem sele isemthethweni.
Imalunga neBalong 5000, Yiyo le nto imodem yokuqala ye-5G ebizwa ngokuba yiHuawei. Inkampani iyivelisile e-China. Kodwa kuthiwa singalindela intetho kwi-MWC 2019 e-Barcelona, ​​ngenyanga.
Kwaphela iinyanga kwathiwa uphawu lwesiTshayina luya kubonisa I-smartphone ene-5G kwi-MWC 2019. Ngoku ukuba le modem isemthethweni, loo nto inokwenzeka iyaqhubeka nokwanda. Okwangoku akukho zinkcukacha malunga neselfowuni. Ngokubhekisele kwi-Balong 5000, uphawu luyichaza njenge Eyona modem ye5G inamandla kwintengiso.
Eyona nto iphambili kule modem yeHuawei kukuba iyakwazi ukuxhasa zombini ezizimeleyo (SA) kunye non-autonomous (NSA) 5G uyilo lwenethiwekhi. Ke inesakhono sokugubungela yonke imbonakalo yenethiwekhi. Oku kucinga ukuba sele ukulungele ukuthunyelwa kwezi nethiwekhi, kwakuza kwenzeka ntoni ngo-2020.
Okwangoku IHuawei khange ivelise zonke iinkcukacha zeBalong 5000. Siyazi ukuba iya kuba nenkxaso ye-FDD kunye ne-TDD. Ukongeza, isantya sayo sishiya sineemvakalelo ezintle. Iya kuba nakho ukufikelela kwi-4,6 Gbps kwi-sub-6Ghz band kunye ne-6,5 Gbps kwi-mmWave. Oku ubuncinci yimilinganiselo eTshayina esele yenziwe ukuza kuthi ga ngoku. Ukongeza, kufuneka songeze ukuba iza nenkxaso yeV2X, unxibelelwano lonxibelelwano oluvela kwizithuthi.
Zonke ezi ziinkcukacha ezize kuthi ukuza kuthi ga ngoku malunga neBalong 5000, Imodem yokuqala ye-5G yeHuawei. Ukuba yinyani, kwi-MWC 2019 siya kuba nakho ukufunda ngakumbi ngayo. Uphawu lwaseTshayina lunokude lubonise imodeli esele inayo. Asazi, kodwa sinethemba lokuba kuya kubakho idatha eninzi kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei izisa iBalong 5000, imodem yayo ye5G
Izicelo ze-Android zokufumana ngakumbi kwi-Instagram
IVivo APEX 2019: Ifowuni entsha ngaphandle kwamaqhosha, amazibuko okanye iindawo zokubeka